Askari soo qaatay qorigiisii wuxuuna galay darbi asagoo isku diyaariyey dagaal ka dhan Amison DHACDO UGUB AH! | kowtharmedia.com
Home WARAR Askari soo qaatay qorigiisii wuxuuna galay darbi asagoo isku diyaariyey dagaal ka dhan Amison DHACDO UGUB AH!
Askari soo qaatay qorigiisii wuxuuna galay darbi asagoo isku diyaariyey dagaal ka dhan Amison DHACDO UGUB AH!
DHACDO UGUB AH!
Nin taksiile ah oo aan saaxiibo nahay ayaa saakay sidii Caadada ahayd u shaqo tagay Garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde Airport.
Taksiilihii ayaa wadada wuxuu kula kulmay kolonyo baabur ah oo katirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Burudi oo ayaguna u socday dhanka airporka, baabuurtaas oo tiradooda uu ku sheegay 8 baaburta waawayn ah ayuu daba socday in muddo ah, ilaa ay ka gaareen Koontarool (check-point) ay joogeen Ciidan ka tirsan kuwa Qaran Soomaaliyeed.
Mid kamid ah Askartii joogtay Koontaroolka ayaa si tilmaan ah (Gacan-taag) ugu sheegay ciidanka AMISOM in ay iska Laabtaan oo aanay u ogolayn inay gudbaan.
Ciidankii AMISOM ayaa sidii lagu yaqiinay ka madax adaygay Laabasho ay dib u laabtaan, muddo daqiiqado ah markii ay is adkeeyeen ayaa Askarigii soo qaatay qorigiisii wuxuuna galay darbi asagoo isku diyaariyey dagaal.
Dabadeed ayey AMISOM si dhaqso ah ku kala wareegeen waxayna ku laabteen halkii ay ka yimaadeen, Taksiilihiina oo aaminsanaa in aan asaga loo ogolaan doonin meel AMISOM laga celiyey ayaa kala wareegay si uu u laabto asna.
Waxaa si lama filaan ah ugu yeeray Askarigii oo ku yiri gudub.
Taksiilihii oo aad u faraxsan ayaa gudbay, markii uu Airporkii tagay ayuu nasiib u helay inuu soo qaado nin qurbaha ka yimid; wuxuuna la wadaagay qisadii lama filaanka ahayd ee ku Qabsatay Koontaroolka.
Ninkii qurbaha kayimid oo aad u faraxsan ayaa soo gaday Labo kartoon (2kartoon) oo Cabitaam ah.
Markii ay Koontaroolkii yimaadeen ayuu u qaybiyey Ciidankii joogay halkaa. Ciidankiina way gudoomeen cabktaankii.
UMADA SOOMAALIYEED ILAAHEEY GUUSHA HA IDIIN SIYAADSHO
Previous PostDaawo: Xildhibaanadii GALMUDUG oo Ka hadlay Doorashada Madaxwaynaha “Sidii Somalia ayuu isbedel dhacayaa"! Next PostMUUQAAL: Gabadhii uu dhalay Taliye Casayr oo lagu Dilay Berbera oo si kulul Uga Hadashay Dilkii Aabaheed (Daawo)